musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Tungamira ndege kubva kuMunich kuenda kuDubai kuLufthansa izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nekuda kwekudiwa kwakanyanya, Munich ndiyo nzvimbo yechitatu yeLufthansa Group kuwedzera Dubai kune yayo ndege purogiramu, mushure meFrankfurt neZurich.
Lufthansa inozivisa nzira nyowani yeUAE.
Kubva muna Gumiguru 1, 2021, Lufthansa inobhururuka isingamire kubva kuMunich kuenda kuDubai.
Ndege nhatu dzevhiki nevhiki neAirbus A350-900.
Kana iwe uchida kuwedzera yako zhizha, ikozvino ndiyo yakanyanya mukana mukana wekudaro. Ingori panguva yeiyo yechando hafu-yegore uye inopindirana nekuvhurwa kweExpPO, Lufthansa iri kutora kubva kuMunich yakananga kuDubai.
Kubva muna Gumiguru 1 kusvika Kubvumbi 23 - kupera kwezororo reBavaria Isita - Airbus A350-900 ichabhururuka katatu pasvondo kuenda kuPersian Gulf.
LH 638 inotanga nenguva dzakanaka dzekubhururuka: Kubva kuMunich kuri 10:30 pm, kusvika muDubai na6: 40 mangwanani zuva rinotevera. Ndege yekudzoka inoenda na8: 30 mangwanani uye inosvika muMunich na12: 50 pm
“Tinofara kuti tinokwanisa kupa nzvimbo dzinoyevedza dzinoenda kure senzira itsva kubva kuMunich kekutanga kubva pakatanga denda iri. Nekuda kwekuda kwakanyanya, Munich ndiyo yechitatu hub yeiyo Lufthansa Boka kuwedzera Dubai kuhurongwa hwayo hwekubhururuka, mushure meFrankfurt neZurich. Uye kekutanga, vatakurwi vedu vachakwanisa kufamba kubva kuMunich kuenda kuEmirates nendege dzinofamba-famba kwenguva refu muzvikepe zvedu: iyo Airbus A350-900, "anodaro Stefan Kreuzpaintner, Musoro weMunich hub uye Head of Sales. yeRufthansa Boka.
Lufthansa yatobhururuka kubva kuMunich kuenda kuDubai kubva 2003 kusvika 2016, nguva pfupi yadarika ine Airbus A330.
Hutano uye kuchengetedzeka kwevatakuri ndiyo inonyanya kukoshesa Lufthansa. Iwo masevhisi anopihwa pabhodhi nemaitiro pamberi uye panguva yekufamba nendege saka akachinjiswa kune zvazvino marongero zvinodiwa. Pakati pezvimwe zvinhu, izvi zvinoshanda kumitemo yedaro yekubhodhi uye kuburuka uye chisungo chekupfeka mask yechiremba. Hepa mafirita anochenesa iyo kabhini mweya, yakafanana neimba yekuvhiya.